Atody voaroy - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Hanombohana22 minitraOlona 4
Ity dia iray amin'ireo sakafon'ny vadiko ary matetika aho no manao an'io mandritra ny vanim-potoana. fotoana tsara. Na dia marina aza, efa ho lasa ny fahavaratra ary tsy nanomana an'ity fomba fahandro ity aho.
Roa faran'ny herinandro lasa izay dia tonga nisakafo ny ray aman-dreniko ary nieritreritra ny fampianarana faharoa aho, saingy nandritra ireo andro ireo dia somary "matevina" ianao ary tsy afaka nieritreritra na inona na inona lovia tsotra sy manankarena indray mandeha. Naneho hevitra tamin'ny zanako vavimatoa aho fa tsy hitako izay tokony hohanina ary hoy izy haingana: "Neny a, atody !! ..." Tsy io lovia io no noresahiny fa ny atody nendasina, izay nahavery saina azy, Saingy nomeny ahy ny hevitr'ity resipeo ity ary hoy aho hoe: atody amin'ity indray mitoraka ity".
Ireo atody ireo dia voaomana ao anatin'ny fotoana fohy ary ny zavatra tsara momba an'io lovia io dia ny vitantsika amboary mialoha. Izy ireo dia iray amin'ireo resipeo izay manaisotra antsika amin'ny olana amin'ny fitsidihana, satria ianao no nanao azy ireo tamin'ny maraina ary rehefa tonga ny fitsidihana dia efa vonona daholo ny zava-drehetra, mila mandeha mankany amin'ny vata fampangatsiahana fotsiny isika ary mahitsy amin'ny latabatra.
Rehefa mahandro ny atody ao anaty sobika aho dia asiana vinaingitra, toy ny a hafetsena mba tsy ho vaky ny atody rehefa mahandro.
Ary raha mila bebe kokoa ianao hevitra hanome aingam-panahy anao eto ianao a fanangonana hevitra maromaro.
1 Atody voahidy
Resipeo matsiro miaraka amin'ny atody izay azontsika atao mialoha.
Atody lehibe 6
Vinaingitra misy vinaingitra
Voahangy kely 2
Oliva oliva kely 1 (apetrako maitso maitso)
Voasarimakom-boaloboka kely 1 (manamboatra lamba kely izahay handravahana)
Mayonnaise 4 sotro fihinanana
salady voatetika nohaingoina handravahana (jereo ny fiomanana eto)
Apetrakay ao anaty harona ireo atody ary mitahiry.
Napetrakay tao anaty veran'ny thermomix ny rano ary napetrakay tao anatiny ny harona. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Aorian'ny fotoana, esorinay ny harona amin'ny alàlan'ny spatula ary hampangatsiaka ny atody amin'ny rano mangatsiaka.
Miaraka amin'ny vera madio isika dia manapaka ny letisia amin'ny alàlan'ity fanarahana ity.
Nopotsehinay ireo atody ary notapahinay tamin'ny antsasaky ny halavany. Izahay dia manasaraka ny kodiarana, mametraka azy ireo amin'ny vera madio sy maina ary makarakara 2 segondra, hafainganam-pandeha 3.
Esorinay avy amin'ny vera ny isam-bolo atody roa sosona handokoana rehefa avy eo ary hotehirizina.
Ampio amin'ny vera miaraka amin'ny yolk grated, ny tuna ary ny mayonnaise. Izahay dia manao fandaharana 3 segondra, hafainganam-pandeha 3. Feninay io fangaro io ny faritra tsirairay amin'ny atody.
Napetrakay tao anaty loharano iray ny salady voamaina sy maina ary napetrakay manodidina ny atody tsirairay avy ny famenoana. Famafazana yolk grated roa sotro fihinanana eo amboniny ary asio oliva eo ambonin'ilay atody tsirairay voahodidin'ny sakamalaham-lakolosy, toy ny hoe volondavenona io, ary manana lovia tsara izahay.
Tokony halaina mangatsiaka be izy ireo. Raha manana ambiny fenoina isika, dia azontsika raisina amin'ny mofo voahidy toy ny canapés izany.
Fanazavana fanampiny - Resina atody 9 devoly hankafy ny fahavaratra
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Celiac, Tsotra, atody, Tsy mahazaka laktose, Latsaky ny 1/2 ora, Resipeo amin'ny fahavaratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Appetizers » Atody voahidy
Atody matsiro izy ireo. Ny reniko dia nanao azy ireo tany an-trano foana, ary ankehitriny nataoko tany amiko izy ireo. Namboarina vetivety izy ireo ary tian'izy ireo ny rehetra. Ankoatr'izay dia mamela fiovaovana maro izy ireo, na amin'ny famenoana na amin'ny haingo.
Nifidy fomba fahandro tena tsara ianao androany 😉
Tena manan-karena tokoa izy ireo! Ao an-trano dia tsy mahantra izy ireo amin'ny fahavaratra satria ny fiomanana azy ireo mialoha ny andro dia miparitaka bebe kokoa!
ny zava-drehetra dia ao anaty eritreritra, na saika ny zava-drehetra…. eo koa ny fahaizanao
Hitanareo, atody misy voaroy miaraka amin'ny isan'ny fotoana nanaovako azy ireo ary tsy miala amin'ny farango eo ambonin'ny lovia izy ireo, mifandona, miolakolaka ... mahita azy ireo….
Misaotra betsaka hatrany.
Tsara izy ireo ary tsara aseho, izy io dia iray amin'ireo lovia novolavolain'i Neny.
Izay !! Toa tsara izany ary tsara tarehy precentacion hasi tianao halaina, misaotra anao, manampy be dia be izahay, oroka
Valiny amin'i CONCHI
Mahafinaritra tokoa ny mitadidy ny fomba fahandro sasany, ny zanako vavy dia iray amin'ireo tiany ihany koa, na dia manala baraka azy aza ireo huvos nendasina ja hotehiriziko ilay recette, misaotra
Mamaly an'i karmela
Tena tsara, manana pint koa izy ireo…. Nasiako voatabia nendasina kely niaraka tamin'ny mayonnaise ary matsiro be ry zareo.
marilo jimenez dia hoy izy:
Efa ela aho no tsy nihinana an'ireny, ny reniko no nanao an'izany matetika.
Amin'ity faran'ny herinandro ity aho.
Misaotra an'ireo resipeo.
Mamaly an'i marilo jimenez
VERONIKA dia hoy izy:
Ny marina dia manana pint izy, imbetsaka dia lanin'ny fahitana. Miarahaba antsika rehetra.
Valiny amin'i VERONICA
Nataon'i Neny tao an-trano foana izy ireo, indraindray tamin'ny Krismasy ... nahagaga tokoa izany ary tian'ny ankizy rehetra izy ireo. Ankehitriny dia ataoko izy ireo ary mazava ho azy fa tena tsara izy ireo. Andramo ity haingon-trano ity: Mitsitsia yolka tokony ho telo na efatra (iray manontolo raha mampiasa mofomamy ianao na voahosotra amin'ny thermos raha tsy). Ao anaty lovia mahafinaritra dia asio mayonnaise manify (ataoko izany satria tianay kokoa ilay izy) ny atody nofonosina, fa miatrika ambany, tsy toy ny amin'ny sary sy ny paompy namboarantsika trondro, mena-mena. (Napetrako ny fanaovana lakroa) sy oliva (raha fehezam-boninkazo tsara kokoa) ary atsihinay eo an-tampon'ny atody ary avela eo amboniny ny oliva. Vantany vao vita ny zavatra rehetra, dia hafafintsika ny atody amin'ny atody rehetra (miaraka amin'ny fikosoham-bary fitantanana tsara kokoa: ampandaloviko amin'ny alàlan'ny atody mandritra ny fotoana itambarako azy ny atody, toa ohatran'ny avy ny orana)
Oroka, hoy ianao amiko.
Ny marina dia matsiro izy ireo ary tian'ny rehetra!
Ummmmm matsiro !!!!!
Ity lovia ity dia hanafaka anao amin'ny olana amin'ny fotoana fohy, ankoatry ny fahaizanao tsara hehe. Tian'ny rehetra izy ireo ... tsara toy inona ...
Ny ravaky ny lovia dia manintona sy manintona tokoa.
Misaotra, oroka !!!
Moni dia hoy izy:
Nataoko izy ireo ny sabotsy alina, nisakafo hariva niaraka tamin'ny namako aho ary tsy nisy niangana na iray aza… matsiro ry zareo !!!!. Fiarahabana
Mamaly an'i Moni
fahagagana mandeha fiara dia hoy izy:
Enga anie izy ireo nandefa ny boky. Tsy afaka mampihena ny lanjako.
Mamaly ny fahagagana galán fiara